"Altaba" no anarana vaovao Yahoo izay tsy hanana an'i Marissa Mayer intsony ho CEO | Vaovao momba ny gadget
Ilay savony izay fonosina ao anatiny Yahoo Nandritra ny fotoana ela dia toa tsy misy farany izany, ary farafaharatsiny mba tsy ho tapitra izao. Ary izany dia tamin'ny ora farany fantatsika fa tsy ho ela izy dia hanova ny anarany, farafaharatsiny ny ampahany izay tsy hampidirina ao Verizon, ary izay Marissa Mayer hitsahatra tsy ho Tale jeneralin'ny orinasa.
Nefa, andao isika hanomboka amin'ny voalohany. Tokony hotadidintsika fa taloha kelin'izay i Verizon dia nahazo Yahoo tamin'ny vidiny 4.830 tapitrisa. Ity hetsika ity dia nankatoavin'ny mpampiasa vola sy ny governemanta, na dia tsy nomena ny toerana ofisialy izay nantenaintsika rehetra aza. Ankehitriny fa toa milamina daholo ny zava-drehetra toa lasa nanomboka niasa ireo tovolahy tao Verizon.
Ny sehatry ny haitao sy ny publication an'ny Yahoo dia hampidirina ao Verizon, hamela ny sampana fampiasam-bola amin'ny sehatra hafa, izay hatao batemy ho "Altaba" ary tsy hanana an'i Marissa Mayer na David Flo (CEO sy mpanorina ny Yahoo) eo an-tampony. Anisan'ny asongadin'ity sampana fampiasam-bola ity ny tombony 15% ananan'izy ireo ao Alibaba, izay mety mitentina 30.000 miliara dolara mahery.
Ny fametraham-pialàn'i Marissa Mayer, izay tonga mpamonjy an'i Yahoo ary lasa nifanohitra tamin'izany, dia tsy noho ny fampiharana isan-karazany “noho ny tsy fitovian-kevitra sasany, fa ny fandaminana indray ilaina hitantanana ny iraka vaovaon'ny orinasa”.
Toa tsy misy farany ny tantaran'i Yahoo tsy misy tohiny ary matahotra izahay fa eo am-piandohan'ny tantara iray izay toa lavitra be ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » "Altaba" no anarana vaovao Yahoo izay tsy hanana an'i Marissa Mayer intsony ho CEO
LG Display dia nanambara ny efijery 5,7 "QHD + LCD miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9